Soo-saareyaasha FM-ka Soo-saareyaasha, Shirkadda Cod-bixinta, Qaybaha Qalabka Maqalka
Iibiyaha Qalab Raadiyaha ugu Fiican ee Shiinaha
Ku soo DHAWOOW Baahinta FMUSER, saaxiib, kuwaas ma raadinaysaa?
Soo saaraha Qalab Raadiyaha - FMUSER Broadcast waa mid ka mid ah soosaarayaasha baahinta FM-ka ugu wanaagsan ee ganacsiyada raadiyaha caalamiga ah ee siiya hawlwadeenada idaacadaha Qalabka idaacadaha oo iib ah ee adeegyada baahinta aan lala xidhiidhin ee hoos yimaada faafitaanka COVID-19. Qaar xal baahinta diinta waxaa si weyn loogu isticmaali karaa adeegyada baahinta faafa sida tiyaatarada wadista iyo baahinta kaniisadda.
Iibiyaha Qalabka Streaming Live - Intaa waxaa dheer, FMUSER Broadcast sidoo kale waa alaab-qeybiye qalab toos ah oo la isku halayn karo. The qalab live Streaming iib ah si gaar ah loogu dhisay nidaamka isku dhafka IPTV wuxuu ka daboolayaa qalabeeyayaasha qalabka IPTV si loo dhamaystiro nidaamyada IPTV, kaas oo loo isticmaali karo xaalado kala duwan oo maqal iyo muuqaal gudbin ah.
Kaalmada onlaynka ah ee la heli karo - Qiimaha warshadda, tayada wanaagsan iyo waxqabadka sare ayaa ah seddex arrimood oo muhiim u ah FMUSER si ay cagta ugu dhigto suuqyada aadka u tartanka badan. FMUSER sidoo kale waxay bixisaa xirfadle online FAQ, qalab tilmaamaha iibsashada, loo sameeyay xal baahinta, oo baaxad leh khayraadka blog free si ay kaaga caawiyaan iibsashada qalabka idaacada iyo qalabka baahinta tooska ah ee tayada ugu fiican
Waxaan u soo bandhignaa Qalabka baahinta Suuqa Adduunka!
Baahinta FMUSER waa khabiir ku takhasusay qalabka idaacada oo ka yimid Shiinaha. Iyada oo tafaariiqda iyo jumlada qalabka idaacada ay ka kooban tahay ganacsiyo kala duwan nidaamka soo noqnoqda raadiyaha ku saabsan gudbiyaasha baahinta FM/TV ee gobolka adag. Hel xigashooyinkii ugu dambeeyay? Aynu wada hadalno khubarada RF!
Waa maxay baahinta FMUSER:
Qalabka Idaacadda ee Iibka - Qalabka isku xirka istuudiyaha ee loogu talagalay la socodka amniga, gudbinta fiidiyowga iyo meelaha kale. Xirmooyinka gudbinta baahinta FM-ka ee xarunta raadiyaha FM waxay u qaabeysan yihiin 0.1W ilaa 10kW+. Qalabka gudbinta TV-ga dhijitaalka ah iyo analooga UHF/VHF ee xarumaha Warbaahineed ee TV-ga. FM/UHF/VHF Broadcast Antenna (oo ay ku jiraan anteenooyinkooda iyo aaladaha tijaabada RF) si loo wanaajiyo soo dhaweynta calaamadaha RF iyo gudbinta. Shaandheeyaha awoodda sare ee RF iyo isku-darka RF waxaa ka mid ah isku-dariyeyaasha-starpoint-ka iyo isku-dariyeyaasha laanta ee xarunta raadiyaha. Wax dheeri ah aqriso>>
Xidhmada Saldhigga Raadiyaha oo dhamaystiran Dhammaan hal xal waxaa ka mid ah gudbiyaha baahinta FM-ka, anteenada baahinta FM-ta, fiilada coaxial RF, xiriiriyaha RF, processor-ka maqalka, isku-darka kanaalka badan, makarafoonka iyo bracket-ka, af-hayeennada daboolka BOP, sameecadaha dhegaha, iwm. Wax dheeri ah aqriso>>
Qalabka Streaming Tooska ah ee Iibka iyo IPTV Xalka - Ilaa 16 kanaal IPTV hardware encoders iyo transcoders (1 channel iyo 4 channels waa ikhtiyaari) iyo qalab kale IPTV headend qalab loo isticmaalo streaming live, fogaanta waxbarashada online, fogaanta barashada, kulan online fog, iwm dhamaystiran IPTV xal hotel, resturant, hopitality. iyo isbitaal iwm. Wax dheeri ah aqriso>>
Sidoo kale ku dar:
Maareynta hawlgalka iyo taageerada dayactirka, oo ay ku jiraan dalabka degdega ah ee badeecada iyo adeega iibka kadib waxaa ka mid ah: Soo celinta badeecada iyo beddelka, taageerada farsamada dayactirka alaabta, dammaanadda alaabta.
Xidhmada Istuudiye Raadiyaha FM oo Dhamaystiran
Ku dhex wad baahinta kaniisadda
Ku dhex wad baahinta Tiyaatarka
Qalabka Daawashada Tooska ah ee Iibka
Wada-hawlgalayaasha Adduunka oo dhan
Qalabka Idaacadda ee Iibka
Anteenada Baahinta FM-ka ee Iibka
Soo dhaweynta Nidaamka Nidaamka IPTV
Diirada-saarista Wax ka badan Tayada marka loo eego Qiimaha
Baahinta FMUSER waxay diiradda saartaa wax soo saarka Qalabka RF iyo qaybaha RF oo leh waxqabad sare iyo qiimo jaban. Waxaan bixinaa dhammaan qalabka gudbinta maqalka iyo muuqaalka ah ee loogu talagalay idaacadaha dawladda iyo kuwa gaarka loo leeyahay ee ugu caansan, goobaha la gudbiyo iyo istuudiyaha raadiyaha ee adduunka oo dhan, iyo kuwa gaar ah. xalal baahinta habaysan iyo adeegyada rakibaadda goobta ayaa diyaar ah.
Mahadsanid warshadaha wax soo saarka, Awoodeena R & D ee madax-bannaan iyo awoodda wax-soo-saarka qalabku waa mid gaar ah. Waxaan leenahay qiimo iibsi aad uga jaban marka loo eego soosaarayaal badan oo qalabka idaacadaha maxaliga ah iyo isku dhafka nidaamka gudbinta raadiyaha. Waxaad ka iibsan kartaa laba jeer ama ka badan qalabka baahinta sare ee qiimaha isku mid ah Baahinta FMUSER. Thanks to kooxdayada farsamada ee khabiirka ah iyo kooxda iibka, kumanaan macaamiisha caalamiga ah ayaa helay xalal dhammaystiran oo gaar ah, oo ay ku jiraan kuwa ugu fiican Qalabka hardware RF laga bilaabo istuudiyaha turnkey ilaa goobta gudbinta, gudbiyaha baahinta dhamaadka-sare ilaa qalabka isku xirka istuudiyaha, iyada oo aan laga reebin, qiimo jaban iyo waxqabad sare sida had iyo jeer.
Khayraadka Loo Sameeyay Kaliya Waayo-aragnimada Isticmaalaha Ugu Wanaagsan
Daraasiin xalal ah oo loogu talagalay baahinta tooska ah iyo baahinta raadiyaha oo leh qiime jaban iyo tayo sare leh, oo loo qoondeeyay kaliya khibradda isticmaale ee ugu fiican.
Macluumaad dheeri ah+
Qalabka staton radio-ga ee leh tignoolajiyada ugu dambeysay ee baahinta ayaa wanaajisa isku darka qalabka iyo qiimaha iibka ee hawlwadeenada idaacadaha adduunka oo dhan.
Ilaha bilaashka ah ee aan xadidneyn sida taageerada iibka ka dib oo dhameystiran iyo hagitaan iibsi oo dhameystiran ayaa la bixiyaa si loo dhiso faham wanaagsan oo FMUSER khabiir kasta oo raadiye ah ama hiwaayad ah.
Waad ku mahadsan tahay kooxdayada khabiirka ah ee blog-ka, malaayiin balaayiin ah oo xiiso leh oo wax ku ool ah blog-yo farsamo oo gaar ah iyo wararkii ugu dambeeyay ee warshadaha baahinta ayaa la filayaa inay kaa caawiyaan xallinta "Maxay, Sababta, Sidee iyo Halkee"
Xalka iyo adeegga baahinta maqalka iyo maqalka ee hal-joogga ah waa la aqoonsan yahay adduunka oo dhan. Ilaa hadda, waxa naloo habeeyey in ka badan kumanaan xal baahinta raadiyaha iyo xalal toos ah oo toos ah, waxayna si guul leh u aasaastay iskaashi muddo-dheer ah oo ay la yeelato shakhsiyaad iyo isku-dubaridyaal idaacado ka kala socda in ka badan 200 oo waddan iyo gobollo ah. Haddii aad u baahan tahay qalab idaacad iib ah, fadlan hubi inaad nala soo xiriirDHAGAHA AYAANU NAHAY. Ka go'an in ay kaamil ah xallinta gudbinta baahinta maqalka iyo muuqaalka ah ee xaalad kasta oo baahinta ah, waxaan nahay Baahinta FMUSER.
Waxaan Hubinaynaa Faahfaahin Kasta